Ra'iisul Wasaare Khayre oo Kormeeray Qaar Ka Mid Ah Xarumaha Wasaaradaha Dalka -Sawirro
Tuesday March 13, 2018 - 20:33:59 in Wararka by Wariye Qoslaaye
Raisul Wasaaraha Xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta kormeer shaqo ku tegay qaar ka mid ah Xarumaha dowlada ee Magaalada Muqdisho, isagoo dhinaca kale galabta la damaashaaday dadweyne ku sugnaa Xeebta Liido.
Wasiirka arrimaha dibeda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa Raisul wasaare Khayre warbixin ka siiyey Waxqabadkiisii mudada kooban ee uu xilka hayo iyo sida ay u socdaan howlaha Wasaaradda, wuxuuna xusay inuu ku faraxsan yahay booqashada uu xarunta Wasaarada ku yimid Raisul Wasaaraha.
Sidoo kale, Ra’isul Wasaare Khayre iyo masuuliyiinta la socotay ayaa galabta booqday Hotel Dolphin oo ah hotel casri ah oo dhowaan laga dhisay Xeebta Liido ee Magaalada Muqdisho isagoo Caffe la cabay, lana sheekeystay qaar ka mid ah dadkii ku sugnaa hotelka oo si weyn u xiiseynayey la kulankiisa kuna faraxsaanaa.
Mudane Khayre ayaa intii uu ku sugnaa Liido waxaa sidoo kale uu la damaashaaday dhalinyaro kubad ku ciyaareysay Xeebta, isagoo ka wareystay xaalada amniga Magaalada iyo waxyaabaha ay jeclaan lahaayeen in dowladu ay deg deg wax uga qabato, waxaana dhalinyaradii halkaas ku sugeyd ay si weyn ugu farxeen booqashada uu ugu yimid raisul wasaaraha iyo xog-wareysiga uu la yeeshay.
Kormeerka joogtada ah iyo booqashada raisul Wasaaraha xukuumada Somalia ku sameeyo xarumaha heyadaha dowlada iyo goobaha bulshada ayaa muujineysa sida Xukuumadu uga go’an tahay dardar gelinta gelinta howlaha dowlada iyo dareensiinta bulshada in madaxdoodu yihiin kuwo yihiin kuwo aan ka fogeyn oo had iyo jeer ka warqaba xaaladaha ay ku sugan yihiin.